Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Gout (ဂေါက် ရောဂါ )
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ကဘာလဲ။
ဂေါက်ရောဂါဆိုတာ အဆစ်ရောင်ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အဆစ်တွေမှာ ရုတ်တရက် ကိုက်ခဲခြင်း၊ နီခြင်း၊ နှင့် ရောင်ခြင်းတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ခြေမမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်ပေမယ့် ခြေထောက်ပိုင်းမှာ တခြားအဆစ်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဒူးဆစ်၊ ခြေချင်းဝတ် နှင့် ခြေဆစ်တွေမှာ လည်း တခါတရံ ဖြစ်တတ်ပြီး လက်မှာ ရှိတဲ့ လက်ဆစ်၊ လက်ကောက်ဝတ် နှင့် တံတောင်ဆစ်တွေမှာ တော့ အဖြစ်နည်းပါတယ်။ ကျောရိုးဆစ်ကတော့ တော်တော်ရှားရှားပါးပါးမှ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
လူ ၂၀၀ မှာ ၁ ယောက် ဂေါက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်း အရွယ်မရွေး ယောင်္ကျား၊မိန်းမ အကုန်ုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ယောင်္ကျားတွေက မိန်းမတွေထက် ပိုဖြစ်နိုင်ပြီး သက်လတ်ပိုင်းတွေက ပျိုဖော်ဝင်အရွယ်တွေထက် ပိုဖြစ်နိင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဂေါက်ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး လက္ခဏာတွေကတော့-
ရုတ်တရက် ပြင်းထန်တဲ့ အဆစ်နာခြင်း အထူးသဖြင့် မနက်အစောပိုင်းမှာ ဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
သင့်မှာ အထက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။ ဂေါက်ရောဂါကို မကုပဲ ထားလျှင် အဆစ်တွေကို ထိခိုက်လာနိုင်စေပါတယ်။
ထို့ပြင် သင့်မှာ အဖျားရှိလာပြီး သင့်အဆစ်တွေပူလာတယ်၊ ရောင်လာတယ်လို့ ခံစားရလျှင် ရောဂါပိုးဝင်တဲ့ ခက္ခဏာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ချက်ချင်း ကူသမှု ခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဂေါက်ကို သွေးထဲမှာ ရှိတဲ့ uric acid(urate) ဆိုတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတစ်မျိုးက ဖြစ်စေပါတယ်။ Uric acid က အန္တရာယ်ရှိတဲ့ အရာမဟုတ်ပဲ ခန္ဒါကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အများစုက ဆီးနဲ့ပါသွားတတ်ပြီး တချို့ကတော့ ဝမ်းနဲ့ ပါသွားပါတယ်။
ဂေါက်ရှိတဲ့ လူတွေမှာ တော့ uric acid ထုတ်လုပ်မှုက ပိုများပါတယ်။ ပမာဏ အရမ်းမများခင်မှာ အခဲသေးသေးတွေအနေနဲ့ Uric acid တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ဒီအခဲလေးတွေက အဆစ်တွေမှာ အနည်ထိုင်လာပြီး အဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် နာကျင်ကိုက်ခဲ စေခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါတယ်။
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
gout ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Water pills ကဲ့ သို့သော ဆေးဝါးများ
ခွဲစိပ်မှု နောက်ဆက်တွဲ သို့ ထိခိုက်မိခြင်း
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
သင့်မှာ ဂေါက်ရှိမရှိ သွေးစစ်ရုံနဲ့ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဆရာဝန်က ရောင်နေတဲ့ အဆစ်အတွင်းမှ အရည်အချို့ကို လဲ အပ် နှင့် ဆေးထိုးအပ်သုံးပြီး ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။၎င်းအရည်ကို မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်မှာ ကြည့်ပြီး ရောဂါ အဖြေရှာ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။
Gout (ဂေါက် ရောဂါ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဂေါက်ရောဂါအတွက် လုံး၀ အရှင်းပျောက်စေတဲ့ ကုသနည်းမရှိသေးပေမယ့် ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကုသမှု အပြီးမှာ နာကျင်တာတွေ၊ ရောင်တာတွေ လျှော့နည်းသွားတယ်လို့ ခံစားရနိုင်ပြီး ကျန်းမာတဲ့ နေထိုင်မှု စနစ်ကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုလျှင် အနာဂတ်မှာ နာတာရှည် ဂေါက်ရောဂါကို တခါတည်း ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဂေါက်ကို အဓိက ကုသတဲ့ ဆေးဝါးများမှာ-
Non-steroid anti-infammatory drugs (NSAID) ဆိုတဲ့ steroid မပါတဲ့ အရောင်ကျဆေးများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရုတ်တရက်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ ဂေါက် နာကျင်မှု၊ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
Steroid တွေကိုတော့ NSAID တွေ အစား တခါတရံ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Colchicine က နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်မဖြစ်နိုင်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
သွေးထဲမှ uric acid ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဆေးတွေဖြစ်တဲ့ allopurinol,probenecid နှင့် feuxostat တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Gout ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Gout ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
Purines များတဲ့ အစားအစတွေကို လျှော့စားပါ။
ပြည့်ဝဆီနည်းတဲ့ အစားအစာ ၊ အဆီနည်းတဲ့ နို့ထွက် အစားအစာတွေကို စားပါ။
ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေနှင့် သီးနှံတွေက သဘာဝသကြားကို သန့်စင်ပြီ သကြားနှင့် အစားထိုးပါ။
အသားနီနှင့် ပင်လယ်စာတွေ ရှောင်ပါ။
သန့်စင်တဲ့ အရည်သောက်မှုကို လုံလုံလောက်လောက်ထားပါ။
အရက်လျှော့သောက် သို့ ရှောင်ပါ။ အထူးသဖြင့် ဘီယာမသောက်ပါနဲ့
သင့်မှာ ရုတ်တရက် ဂေါက်ဖြစ်လာချိန်မှာ လက်ထဲမှာ ဂေါက်အတွက် ဆေးမရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ အောက်ပါနည်းလမ်းများနဲ့ ဂေါက်ကို သက်သာအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်ကို မြှင့်ထားခြင်းဖြင့် အရောင်ကျစေပါတယ်။
ရောင်နေတဲ့ အဆစ်ကို မိနစ် ၂၀ ခန့် ရေခဲ အုပ်ပါ။
လိုအပ်သလို ခဏခဏ ပြန်ကပ်ပေးပါ။ သို့သော် ဖြစ်တဲ့ ခြေထောက်က ပုံမှန် အပူချိန်ပြန်ရောက်သွားပြီးမှ သာ ရေခဲ ပြန်ကပ်ပါ။
Gout. http://my.clevelandclinic.org/services/orthopaedics-rheumatology/diseases- conditions/hic-gout.
Accessed June 12, 2016.
Gout (Gouty Arthritis). http://www.medicinenet.com/gout_gouty_arthritis/page9.htm. Accessed June 12,
2016.Gout. http://my.clevelandclinic.org/services/orthopaedics-rheumatology/diseases- conditions/hic-gout.